Mahazoa vola tsy manam-petra ao amin'ny Pou | Androidsis
Mahazoa vola tsy manam-petra ao Pou
DaniPlay | 13/09/2021 09:30 | Nohavaozina amin'ny 14/09/2021 08:25 | Lalao Android, Tutorials
Pou dia lasa tranga iray, ho biby fiompy ankafizin'ny tanora maro amin'ny finday, na Android na iOS. Ny biby dia tsy maintsy hikarakara azy io handrakofana ny filany rehetra, anisan'izany ny mandro, manome sakafo azy, miala voly ary asa maro hafa amin'ny faran'ny andro.
Ho an'ny mekanika amin'ny lalao dia tsy maintsy manam-bola ianao, noho izany dia zava-dehibe ny hananana ampy raha te hanao karazana asa rehetra ianao. Mora ampiasaina i Pou, mampiankin-doha ihany koa ny tsy maintsy hahalalana izany sy hikarakarana ny ora rehetra mety aminy mba hanomezana fahafaham-po azy.
Raha te hahazo vola tsy manam-petra ao Pou ianao Azonao atao ny manaraka ny dingana vitsivitsy izay holazainay aminao, ara-dalàna ary tsy mandingana ny fitsipiky ny fampiharana ity. Amin'ny vola be dia ho vitanao ny manao ny zava-drehetra amin'ny herinao sy bebe kokoa, satria manana safidy maro ianao.
1 Inona ny Pou?
2 Ahoana ny fomba fampidinana an'i Pou amin'ny Android
3 Ahoana ny fampiakarana haingana ny haavon'ny Pou
4 Ahoana ny fomba ahazoana vola tsy manam-petra ao Pou
5 Miaraka amin'ny Pou Mod APK
6 Miaraka amin'ny Game Guardian
7 Safidy hafa hahazoana vola tsy manam-petra
8 Asaivo ao aoriana i Pou
9 Miaraka amin'ny Pou APK
Inona ny Pou?
Pou dia biby fiompy vahinyTsy maintsy karakarainao farafaharatsiny izany, anisan'ireo lahasa hotanterahina ny fanomezana sakafo, manadio azy, milalao azy, mijery azy mitombo nefa mitombo ny haavony. Azonao atao ny mamoha ny sarin'ny efitrano sy ny fitafiana hankafizanao ny toetra amam-panahy.
Ny mialoha dia ny mahita ny fomba fitomboan'i Pou, filalaovana ny efitrano kilalao sy fanangonana ireo vola madinika, zava-dehibe ahafahana milalao ankoatry ny fividianana zavatra samihafa ho an'ny biby fiompinay. Pou dia manana fanaingoana be dia be, miaraka amin'ny akanjo, akanjo sy satroka, izy rehetra dia tsara hanaovana azy amin'ny fotoana rehetra.
Ity fampiharana ity dia manana fiainana lalao maro, noho izany dia tsy hisy farany miaraka amin'ny fanampiny fanampiny, noho izany dia zava-dehibe ny fananana vola tsy manam-petra ao Pou. Pou koa dia misy amin'ny iOS sy sehatra hafa, izay mamirapiratra toy ny amin'ny Android.
Ahoana ny fomba fampidinana an'i Pou amin'ny Android
Ny fampiharana Pou dia misy ao amin'ny Google Play Store maimaim-poana, iray amin'ny fisintomana indrindra amin'ny karazany. Izy io dia biby fiompy virtoaly izay hahafalifaly mandritra ny ora maro, mety ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe.
Pou dia mamoaka feo sasany, ny maro amin'izy ireo dia tena ilaina mba hahafahan'ny olona manatrika tsara araka izay azo atao, ao anatin'izany ny fotoam-pisakafoanana. Matetika i Pou dia mitarika fiainana mahazatra, anisan'ireo asa iraisana Mandeha mandro izy ireo, misakafo, milalao lalao kely miaraka aminy amin'ny fialamboly sy asa hafa isan'andro.
Maimaimpoana ny fampidinana, mitaky iray minitra fotsiny ny fampiharana apetraka, raha mandeha ho azy kosa ny fanamboarana. Pou dia tonga lafatra ho an'ny ankizy 3 taona no ho miakatra, satria manana ny fotokevitra ifotony, ao anatin'izany ny fahafahany mikarakara biby fiompy virtoaly.
Ahoana ny fampiakarana haingana ny haavon'ny Pou
Iray amin'ireo hafetsen'i Pou hanatsarana ny biby fiompintsika virtoaly ny fampiakarana haingana ny haavony, misy fomba hanamorana izany. Ny tsiambaratelo dia ny fanafainganana ny metabolisma Pou, tena ilaina raha te-hampiakatra ny haavony hatramin'ny farany ambany ka hatramin'ny avo indrindra isika ao anatin'ny minitra maromaro.
Ny zavatra voalohany dia ny manome sakafo an'i Pou mandra-pahatonga azy ho matavy ary tsy noana intsony. Mandehana any amin'ny laboratoara any aoriana ary mividiana potion antsoina hoe Fat Burner. Omeo azy izao ny potion hahafahany mampihena ny lanjany ary avereno ny fahazotoan-komana, dia avereno ny dingana voalohany ary hiakatra haingana ny biby fiompy.
Ahoana ny fomba ahazoana vola tsy manam-petra ao Pou
Hatoronay anao ny fomba hahazoana vola tsy manam-petra ao PouAmin'izany ianao dia ho afaka hanao asa maro, satria io dia ampahany lehibe amin'ny fampiharana. Miaraka amin'ny vola, dia hotanterahina ny lahasa fototra, ny fahazoana entana, ary ny fahaizana mamahana, mampiala voly ary manao ny zava-drehetra amin'ny biby fiompintsika virtoaly.
Isan'andro ianao dia hahazo fandrosoana, hahazo vola madinika vitsivitsy, amin'ity vola ity dia hahazo zavatra, sakafo, akanjo ary kojakoja isan-karazany ianao. Afaka mahazo vola tsy manam-petra ao PouAnisan'izany ny fandraisana andraikitra amin'ny biby, ohatra, ny fandroana azy raha vantany vao azonao atao.
Ny iray amin'ireo fomba hahazoana vola madinika dia ny mamela ny fisokafana misokatra any aoriana, hanangona vola arakaraka ny fandehan'ny fotoana. Azontsika atao ny mandany ny vola madinika amin'izay tianao, ny filamatra dia ny manambatra izay mety rehetra raha te-hividy zavatra tena ilaintsika isika.
Miaraka amin'ny Pou Mod APK
Fomba ahazoana vola tsy manam-petra ao Pou maimaim-poana dia mampiasa ny iray amin'ireo mods misy azy isan-karazany, ao anatin'izany ny Pou Mod APK 1.4.84 malaza. Izy io dia mitovy amin'ny tany am-boalohany, milanja manodidina ny 24 megabytes ary misy fanovana vitsivitsy, anisan'izany ny fananana vola tsy manam-petra hilalaovana ary koa ny fividianana izay rehetra tadiavintsika amin'ny fampiharana Zakek LTD fanta-daza (ny developer).
Raha manokatra azy ianao raha avy misintona azy avy amin'ny pejy anaovana mod, dia ho hitanao fa manam-bola ianao hividianana ny zava-drehetra, ny zavatra ary ny zavatra hafa, ao anatin'izany ny fitafian'ny toetrantsika. Amin'ity mod ity dia manana ny famohana ny zava-bita sy ny entana manokana ianao. ho fanampin'ny vola tsy manam-petra voalaza etsy Pou.
Amin'ny alàlan'ny default, ny tsirairay amin'ireo mpilalao amin'ny fampiharana dia manana farantsakely tsy voafetra, Tsy dia ampiasaina matetika izy ireo, satria feno ny andalan-tsoratra. Amin'ny fiteny marobe, ao anatin'izany ny Espaniôla, ary koa ny hafa toa ny Portiogey, sinoa, anglisy ary fiteny maro hafa misy.
misintona: Pou APK Mod
Miaraka amin'ny Game Guardian
Iray amin'ireo fampiharana lehibe indrindra raha ny amin'ny fanaovana fikafika dia ny Game Guardian fanta-daza. Tsy vitan'ny hoe manana azy ireo ho an'ny Candy Crush Saga sy Clash of Clans, ary iray amin'ireo mpandray tombony ihany koa i Pou, biby fiompy virtoaly fanta-daza izay hita ao amin'ny iOS sy Android.
Game Guardian dia mamela anao hahazo vola tsy manam-petra ao Pou, mety raha te-hahazo ny zava-drehetra ianao, ho fanampin'izay dia ho afaka hamaha zavatra maromaro ianao. Tsy ho mora amin'ny fampiharana ilay fanitsiana, iray amin'ireo maromaro mahatonga azy io ho tena ilaina raha toa ka gamer amin'ireo sy ny lalao hafa ianao.
Mba hanaovana izany, ny zavatra voalohany dia ny fampidinana ny Game Guardian avy amin'ny pejy ofisialy, apetrantsika amin'ny karatra lehibe an-telefaona, omenay ny fampiharana ary araho ireto dingana manaraka ireto mba hampandeha azy tsara:
Tsindrio ny Search Range ary zahao ny safidy All Regions
Farany, kitiho ny «Vita»
Ho hitanao izao ny kisary amin'ny fitaovana finday hahafahana manatanteraka ny tetika amin'ireo lalao mifanentana ireo
Vonona ny rehetra hiasa tsara sy hahazo vola tsy manam-petra ao Pou, ary koa ny hafa amin'ny lohateny toa an'i Candy Crush, iray amin'ireo alaina amin'ny Pou indrindra
Safidy hafa hahazoana vola tsy manam-petra
Pou dia manokatra ny isan-karazany ahafahana mahazo vola tsy manam-petra miaraka amin'ireo safidy ivelan'ny fampiharana. Ny iray amin'izy ireo dia ny Free Fall, serivisy manome valisoa ary tsy maharitra ela, na dia mampanantena izay lazainy aza izy io, ilaina ny manohy miasa ho iray amin'ireo serivisy manan-danja amin'ny Internet. Afaka roa minitra eo ho eo dia hahazo vola be ianao.
Fomba iray hafa ahazoana vola haingana any Pou ny Find Pou, minigame mahafinaritra tokoa izay mendrika andramana raha mbola tsy nilalao azy io ianao taloha. Toy ny hoe tsy ampy izany, Memory dia safidy hafa tena eo ambony latabatra, mitovy amin'ny Find Pou, fa koa amin'ny Free Fall.
Zava-dehibe ny mifandray matetika amin'izy ireo tsirairay avy raha ny hahazo vola virtoaly hampiasa vola amin'ny toetrantsika no tadiavintsika. Raha te-hanana ho avy mahafinaritra miaraka amin'ny biby fiompinay virtoaly ianao, izay hitombo hatrany raha karakaraina isan'andro.
Asaivo ao aoriana i Pou
Iray amin'ireo fomba hahazoana vola tsy manam-petra ao Pou ny fihazonana ny fisokafana hisokatra any aoriana. Rehefa mihazakazaka izy dia hanangona vola tsikelikely ianao, ny hany ratsy dia ho hitanao ny fihenan'ny bateria kely, satria tsy dia avo loatra ny fihinanana.
Tsy dia avo loatra ny fanjifana raha manana bateria isika, satria mazàna mandany isan-jato isan'ora ny fampiharana, manodidina ny bateria 5-6%. Izy io dia fampiharana izay rehefa mandeha ny fotoana dia lasa iray amin'ireo napetraka indrindra, miaraka amin'ny lalao (fampiharana) mandeha mihoatra ny 500 tapitrisa fisintomana.
Raha misokatra foana izy io, Pou dia hanampy vola tsy misy fetra, fa ny zavatra mety dia ny mahita hoe ohatrinona ny vola azo isan'ora. Ny fampiharana dia efa nohajaina be hatrizay, hany ka nahazo lanja be tao amin'ny Play Store izy io, saingy tsy io irery no nahavitany izany.
Miaraka amin'ny Pou APK
Ny iray amin'ireo maody malaza indrindra hahazoana vola tsy manam-petra ao Pou dia «Pou APK», mitovy amin'ilay voalaza teo aloha ary manome vola 10 tapitrisa eo ho eo ianao. Mety indrindra ho an'ireo izay te-hanomboka amin'ny habetsaky ny vola be indrindra, na dia afaka manontany aza rehefa lany ilay tarehimarika mitovy (9.999.999).
Pou miaraka amin'ity APK ity dia misy ny zava-drehetra, fitafiana, sakafo tsy manam-petra ary vokatra hafa raha vao manomboka azy ianao, tonga lafatra raha te-hitafy azy ianao ary manome ny biby fiompinao ny rendrarendra rehetra. Pou APK dia sintonina ao amin'ny vavahady samihafa, ao anatin'izany ny Compucalitv, ilay tranonkala nampiantranoana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Mahazoa vola tsy manam-petra ao Pou
Hevitra Meetic: Mendrika ny mitady mpiara-miasa ve ity tranonkala ity?